Video: Microsoft Windows ekwentị 7 Nleba Anya Ikpeazụ | Martech Zone
Video: Microsoft Windows Phone 7 Ikpeazụ Nyocha
Satọde, Satọdee 11, 2010 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Nyaahụ na Ikpokọta, anyị wee hụ ihe ngosipụta ọhaneze mbụ nke ụdị ikpeazụ nke Windows Phone Microsoft 7. Nke a bụ vidiyo nke Windows 7 Windows Phone ngosipụta.
Windows ekwentị 7 nwere ahụmịhe ọrụ pụrụ iche nke ọrụ dị iche na ihu ọrụ ndị ọzọ na-etinye akara ngosi, a na-egbochi igodo ha. Ebe ọ bụ na etinyere ngwa na .NET na Silverlight, onye nrụpụta Microsoft ọ bụla nọ ebe ahụ nwere ike ịmalite maka ekwentị ma ọ bụ bute ngwa ma ọ bụ egwuregwu ha ugbu a na ekwentị. Nke ahụ bụ nnukwu ihe ebe ọ bụ na enwere ndị crapload nke ndị mmepe Microsoft nọ ebe ahụ - obi abụọ adịghị ya na ị ga-ahụ ọtụtụ ngwa azụmaahịa wuru maka ngwaọrụ ahụ.
Ọkà okwu ahụ na-akọwa na akwadoro ngwa ndị ahụ, mana site na usoro siri ike karịa ka Apple jiri. Ha kwenyere na ọ ga-adị n'etiti anụ ọhịa ọdịda anyanwụ nke Droid na usoro nchịkwa na-achịkwa Apple. Lelee ihe ọ na-ekwu na ihe 9:25 ps oops!
Tags: Nokiawindowsekwentị windowindo ekwentị 7